दाँत कोट्याउन सिन्का प्रयोग गर्नुहुन्छ ? सिन्काले दाँत कोट्याउनु कति हानिकारक? जान्नुहोस् - ज्ञानविज्ञान
कुनै पनि चिज खाइसकेपछि दाँतमा अड्किएको खाने कुरा कोट्याएर फाल्न हामी मध्ये कतिपयले सिन्का अर्थात टुथपिक प्रयोग गर्ने गर्छौं ।
तर, यसले हामीलाई के असर पुर्याइरहेको छ भन्ने थाहा पाएका हुँदैनौं । यसको असरबारे जानिराख्दा राम्रो हुन्छ !
– टुथपिकको प्रयोग बढी मात्रामा गर्दै गएमा दाँतको बीच भाग खाली हुँदै जान्छ । जसले गर्दा त्यहाँ झन बढी खाने कुरा पस्न जान्छ ।
र, मानिसलाई क्याभिटिजको समस्या हुने गर्छ ।
दाँत सुरक्षित राख्न सबैभन्दा राम्ररी ब्रस गर्ने विधि जान्नुपर्छ । बच्चाका लागि फेन्ज टेक्निक, दाँत मिलेकाको लागि मोडीफाइल बास टेक्निकलगायत फरकफरक अवस्थाका दाँतका लागि विधि हुन्छ । दाँतमा रोग लागेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोग नै लाग्न नदिनु सबैभन्दा उत्तम उपाय हो । रोग लाग्न नदिँन निम्न उपाय गर्न सकिन्छ :
दाँत स्वस्थ बनाउने यस्ता छन उपाय
मानिसको स्वास्थ्य एंव सुन्दरताका हिसावले दाँत निकै महत्वपूर्ण छ । दाँतले मानिसको सुन्दरतालाई झल्काउछ । मानिस जस्तो सुकै सुन्दर भएपनि यदी दाँत बिग्रेको छ भने कुरुप देखिन्छ । स्वास्थ्य दाँतलाई मुस्कानको स्रोत पनि मानिन्छ । मानिसको सुन्दरता संगै स्वास्थ्यसंग पनि जोडिएको दाँतलाई स्वास्थ र सुरक्षित राख्नका लागि हेरचाह निकै जरुरी रहन्छ ।
उनले भनिन, ‘सही तरिकाले दाँत सफा गरे ओरल क्यान्सर र फंगलजस्ता रोगबाट बच्न सकिन्छ ।’
दाँतबाट सफा राख्न सके १२ प्रकारका क्यान्सरबाट बच्न सकिने चिकित्सकको भनाइ छ । दसमध्ये ६ जना दाँतका बिरामीको सास गन्हाउँछ । त्यो पनि दाँतकै कारणले हो । ‘गलब्ल्याडर डिसफङ्सन, लिभर डिजिज, डाइबिटिज एन्ड साइनस’ ले गर्दा सास गन्हाउने गर्छ । सास गन्हाउन थालेपछि ब्रस गरेरमात्रै हुँदैन । दन्तविशेषज्ञको सल्लाहअनुसार उपचार गराउनुपर्छ ।
– ब्रसको विस्टललाई गिजाको लाईनमा ४५ डिग्रीको कोण बनाएर राख्नुहोस् । ब्रसको विस्टलले दाँत र गिजाको सतह दुवैलाई छोएको हुनुपर्दछ ।
– २–३ वटा दाँतको बाहिरी भागलाई छुनेगरी ब्रसलाई हल्लाउने (भाइब्रेशन) र विस्तारै घुमाई मिलाएर ब्रस गर्ने । यरिी नै अन्य दाँतहरुलाई पनि ब्रस गर्दै जाने ।
– ४५ डिग्रीको कोण बनाएर गजिा र दाँततर्फ छुवाईकन दाँतको भित्री भागमा हल्लाएर (भाइब्रेशन) यताउता गरी ब्रस गर्ने ।
– अगाडीको दाँतको भित्रि भागमा ब्रसलाई ढल्काई तलमाथी गरी ब्रसको आधा भाग भित्र राखेर माझ्नुहोस ।
– ब्रसलाई दाँतको चपाउने भागमा राख्नुहोस र विस्तारै यताउता गर्दै ब्रस गर्नुहोस ब्रसको पछाडी पटिको भागले जिब्रोलाई सफा राख्नुहोस् । यसले गर्दा मुख भित्र हुने किटाणुलाई हटाउँदट ।
Don't Miss it दाह्री पाल्नेलाई खुसीको खबर, यस्ता रोगहरुबाट बच्न सकिन्छ – जान्नुहोस्
Up Next मैदाबाट बनेका खानेकुराको सेवनले शरीरमा रोग लाग्ने सम्भावना बढेर जान्छ, थाहा पाउनुहोस्